Qodobada Chris Orlob ee Martech Zone |
Maqaallada by Chris Orlob
Wadahadalka iibka ee dhaqanka ayaa waligiis isbedelaya. Dadka wax iibiya mar dambe kuma tiirsanaan karaan qodobbada hadalka ee caadiga ah iyo moodellada daahfurista si ay ugu wareegaan wareegga iibka. Tani waxay uga tagaysaa dad badan oo wax iibiya fursad kale oo aan ahayn inay dib isu uruuriyaan oo ay fahmaan xaqiiqada cusub ee waxa ka dhiga wadahadalka iibka ee guuleysta. Laakiin, ka hor intaanan halkaa aadin, sidee ku helnay halkan? Aynu baarno 3 dariiqo oo wadahadalada iibku ay isbedeleen sannadihii la soo dhaafay. Adoo sahaminaya sida ay dadka wax iibiya u adeegsan jireen wadahadalka